Google dia heverina ho SEO mpilatsaka amin'ny ankamaroan'ny orinasamanatsara ny fisian'ity milina fikarohana ity. Na izany aza, ny tetikady SEO nampiasain'i Google dia miezaka mamolavola an'ity iray nalain'i Bing, syNoho izany, mametraka ny fanontaniana raha mila manatsara kokoa ny fikambanana ny Bing SEO. Yahoo sy Bing dia manjaka manodidina30 isan-jaton'ny fizarazaran'ny tsena, ary noho izany dia tsy azo sazina loatra izy ireo amin'ny fanatsarana. SEO famaritana ny SEOGoogle sy Bing dia manana fahasamihafana sy fitoviana isan-karazany amin'ny ahiahiana.
Ireto manaraka ireto, izay novolavolain 'i Alexander Peresunko, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, manavaka Google avy amin'ny Bing:
Fa maninona i Bing no manahirana anao?
Ny fanatontosana amin'ny Bing dia hanome anao ny sisin'ny fifaninanana hatramin'ny ankamaroan'nyNy raharaham-barotra dia mihevitra fa ny Google ihany no mendrika. Bing sy Yahoo izao dia mitazona 30% amin'ny fikarohana ary dia manome anaotanana ambony mba hahazoana mpanjifa mety, izay tsy miraharaha ny mpifaninana aminao.
Amin'ny fampiasana an'i Bing sy Yahoo dia afaka mamela ny iray ihany koa hanatratra ny demografikaIreo olona noho ny antony marobe dia tsy dia mampiasa ny Google. Izany dia miankina amin'ny mpihaino, ny ampahany amin'ny firenenatoy ny tokantrano. Satria matetika i Google no mitantana ny fanavaozam-baovao tsy tapaka, ny raharaham-barotra dia afaka mampiely ny votoatinyho an'ny mpihaino marobe amin'ny Yahoo sy Bing, satria miezaka ny mampifanaraka ny vaovao farany amin'ny Google izany
Ahoana ny maha-samihafa ny Google SEO amin'ny Bing SEO?
Mandeha amin'ny fandalinana SearchMetrics vao haingana, etsy ambany ny sasantsasany amin'ireo sehatra goavana Bing SEO:
Ny orinasa lehibe indrindra dia ambony kokoa noho ny amin'ny Google
Ny famantarana ara-tsosialy dia mifandray akaiky kokoa
Ny isa an'arivony dia maneho fikambanana akaiky kokoa amin'ny laharana ambony
Ny kalitao sy ny votoatiny manan-danja dia manakiana ny fikarohana.
Ny pejy iray manasongadina teknika dia manana andraikitra manan-danja..
Ny manam-pahaizana avy any Semalt dia manome fanazavana momba izanyNy zavatra hafa ankoatra ny hafa tokony handinihanao amin'ny fanatsarana ny Bing.
Mifanohitra amin'ny Google, Bing dia tsy mahatsapa fahasahiranana rehefamarika samihafa avy amin'ny mpifaninana afrikana. Bing dia maniry ihany koa ireo sehatra taloha amin'ny marika ofisialy toy ny .edu na .govNy fampidiran'i Bing dia mifantoka amin'ny valiny izay heverina ho manan-danja.
2. Fomba fijerena ara-tsosialy
Raha ampitahaina amin'ny Google, Bing dia manindry ny fampahalalam-baovao sosialyka niteraka sioka maromaro kokoa, ampahany, ary tia ny vokatra mitombina. Google dia mbola mampiditra sehatra sosialy amin'ny sehatra sosialyny valin'ny fikarohana nataony tamim-pahombiazana.
Raha mifanohitra amin'ny Google, ho an'ny pejy iray hanamarina ny laharana amin'ny endrik'i Bing,Ilaina ny manana rohy ivelany eo anelanelany.
4. Ny toerana sy ny votoatiny
Ny kalitao sy ny maha-zava-dehibe ny votoaty dia mitarika ambony kokoa ho an'i Bingary Google, fa ny voalohany dia tsara kokoa ny mamantatra ireo tranonkala izay mampiasa flash, izay tsy misy ao amin'ny Google. Bing dia miverina ihany koavalim-panontaniana vitsivitsy raha mbola mifantoka amin'ny orinasa efa miorina i Google.
Raha ny pejy anatiny anatiny, Bing dia manana fifandraisana matanjaka amin'nypejy home raha oharina amin'ny Google. Bing dia miankina amin'ny teny fanalahidy amin'ny alàlan'ny meta sy ny lohatenin-drakitra, raha toa kosa i Google dia manjavozavo kokoamomba ny fomba fijerin'ny pejy.
Tokony hoheverinao ny fahasamihafana misy eo amin'ny Google sy Bingalohan'ny handraisana fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fanatsarana ny toerana misy anao ao amin'ny tranokalan'ny fikarohana Source .